Phakathi amaphutha ezivamile ezenzeka inkulumo kanye nokuntuleka ezihambisana nolwazi imithetho lucebe neenhlathululo zamagama, kufanele ugcizelele Emagama okusho isimo lapho i-interlocutors kabi enkulumweni yakhe izwi-ladidako. Izibonelo leli phutha ingatholakala inkulumo noma ubani kithi. Lokhu kabi kwamagama ukuba agqoke futhi wagqoka emangalisayo futhi esimangalisayo, imidwebo kanye nesiginesha. Gwema amaphutha kuzokusiza ulwazi incazelo yamagama, kanye nokukhombisa ukuqondisisa paronymy mkhuba nezimbangela zayo.
Emagama - into lalivamile ngokolimi lapho amagama amabili noma ngaphezulu ezifanayo yokubiza futhi basonta ingxenye efanayo yokukhuluma. Ngokuvamile, la mazwi aqukethe impande ezivamile, kodwa ukubaluleka kwabo ayifani. Isimo lapho abantu zokuxhumana, KUNGABA EZIBHALIWE NOMA ZOMLOMO, udidekile incazelo yamagama-ladidako abambele igama elilodwa omunye okuthiwa Emagama.
Leli phutha iphathelene uhlobo lucebe futhi ehlobene ngokuyinhloko ngenxa yokuswela ulwazi lamanani amagama athile, imithetho yokusetshenziswa yabo yokukhuluma. Nokho, kwezinye izimo, anikele Emagama esetshenziswa izincwadi ngokudala paronomasia futhi puns.
Igama elithi "paronym" lisuselwa emagameni amabili lesiGreki: para - "eduze" futhi ónyma - "igama." Emagama amazwi afana e umsindo, kodwa hhayi ezifanayo, ngokuvamile cognates. Bangabakhe isigaba efanayo nethi, okungukuthi, eyakho ingxenye efanayo yokukhuluma, kodwa ngesikhathi esifanayo anezincazelo ezihlukile lucebe.
Emagama hhayi nezilandiso kulenkhulumo, njengoba lokhu kuholela ukuhlanekezela izitatimende kuphela. Ngokuvamile pair paronimichnye ehlangana ngamazwi ahlukene. Ngakho, umbhangqwana "ezondlekile" - "ocebile" is kuhlangene emabito ezahlukene. kwakusihlwa okusuthisayo futhi ingane ezondlekile.
Emagama ukufana kungaholela izimbungulu ecasulayo, ngakho kufanele unake lokho ezazikusho ngempela futhi ukukhetha pair kwesokudla. Ukuze kubalulekile ukwazi incazelo yegama elithi. Emagama nalo lisho okufanayo futhi kuhluke kuphela umbala.
Ukusetshenziswa kabi amagama - yephutha lalivamile lucebe.
Kwezinye izimo, ladidako ingaba into eyodwa. Ngokwesibonelo, "romantic" futhi "romantic," "Kuyahlekisa" futhi "Kuyahlekisa" (ukumamatheka noma amazwi), "Ihubo" noma 'emtoti' esiphilile 'yokushisekela izwe "futhi" yokushisekela izwe "isenzo.
amaqembu Major emelelwa ladidako iziphawulo tento, emabito nezandiso kancane.
Ngokuvamile, kwakhiwa umusi kungenzeka ngamazwi bomdabu isiRashiya, isibonelo, "i-marsh" futhi "squishy" noma okufanayo emagama labolekiwe - "Leasing" futhi "ohlwini".
Kunezinhlobo eziningana amazwi anjalo. Ngu imvelaphi ukuhlukanisa impande, affixal, etymological izwi-ladidako. Tibonelo taletinhlobo sihlangana nsuku zonke.
Umsuka ladidako izimpande ezahlukene, kodwa kuthi akufane ngaphandle. Ngokwesibonelo, "Excavator" futhi "esizihambelayo", abanayo ovamile uxhumano semantic.
Affiksanye ladidako bubangelwe langempela, futhi elihlanganiswe ubudlelwane ezivamile semantic, kodwa zinenani ezahlukene ngokusebenzisa ticalo netijobelelo. Ngokwesibonelo, "zokubhalisa" - "ukubhalisa", "umnotho" - "ukonga".
ifomu Etymological esimweni lapho leli zwi elifanayo kubolekwe ulimi ngezindlela ezahlukene. Ngakho, igama elithi "project" bafunda kulokho abakuzwa ngokuqondene Latin, "Project" - kusuka lapho bekhuluma isiFulentshi.
Futhi secrete ladidako izinhlobo kwemagama:
1. kuhluke ticalo:
inkinga - yezicathulo.
2. Libhekene yi tijobelelo:
ayiphenduli - kokunganaki.
3. Isisekelo ihlukile, okungukuthi, kanye nemikhiqizo kanye non-isizinda:
ukuphakama - yobudala;
wezimpahla - umthwalo.
Wokufihla ukuhlukanisa ladidako kokuba kwenani elifanayo, kodwa nanezincazelo ezingefani ncamashí. Ngokwesibonelo, "eside" - "eside", "ukuphila" - "kwansuku". Futhi secrete ladidako nge engasho lutho ehluke ngokuphelele: "Isidleke" - "lokushutheka", "goba" - "ingilazi ibala", "ukugxusha" - "a farce".
ladidako evame ukusetshenziswa
Qaphela njalo kunazo esetshenziswa pair paronimic.
Izimo zethu zihluke kakhulu pair abadumile paronimic kungase kubhekwe njengokwelapha igama elithi "ukubeka" - "don". Lapha kufanele sikhumbule ukuthi ungakwazi abeke othile futhi ukugqoka - lutho.
Kaningi kukhona iziphakamiso Emagama "isignesha" futhi "isignesha". Painting - uzibhale phansi lutho, udonga imidwebo, ngokufaka amarekhodi. Isignesha njengoba - is eyaletha ekupheleni igama idokhumenti.
Ekhelini kanye umthumeli. Destination - lowo sibhekiswe iphasela noma incwadi umthumeli - umuntu kona.
Zakudala kanye zakudala. Zakudala - ejwayelekile asendulo, zakudala ezifanayo - disused.
Democratic neDemocratic - kwenye pair yamagama. Democracy - omunye ohlobene intando yeningi. Democratic njengoba ngokuthile isici sokubusa ngentando yeningi.
Omunye umbhangqwana enkulu yamagama - a "friendly" futhi "friendly". Friendly - okuqondene abangane, friendly kahle - usekelwe ubungani.
Elinengqondo nangekuhlakanipha. Elinengqondo - elungile, kuyiqiniso, kuyavumelana. I okunengqondo - ezihlobene logic.
Kubalulekile ukuba banake ukusetshenziswa kwamagama-ladidako futhi ugweme amaphutha eyayihambisana nokusetshenziswa kwawo.
Izizathu eziyinhloko ezenza amaphutha enkulumweni eyayihambisana nokusetshenziswa ladidako ezine:
1. Ukungabi nolwazi lamanani yegama noma ngisho ambalwa.
2. ukuntula ikhono isikhulumi kulowo mkhakha womsebenzi lapho leli gama libhekisela.
3. okungabi nalwazi banal kanye nokuntuleka silulumagama.
4. Ukubhuka inkulumo.
Paronomasia - indlela ukuthuthukisa i imiva yokukhuluma, sibalo sitayela, okuyinto ukusetshenziswa ngamabomu amazwi nemisebenti yekwakha emagama. Ezisetshenziswa kakhulu ukwakha amagama paronomasia ladidako. Izibonelo zalesi simo kungabonwa kulemisho:
ngijabulele ukukhonza - isihamu ecanuzelisayo.
Yena a guy kungaqali kungavamile, kodwa esihle kakhulu.
Paronomasia - Pun okuhloswe, ukuhlola okuyizinto abafundi wedlakusihlwa ezinhle kwezilimi ukuncokola. Sisho ngokuvamile akuyona kuphela umsindo kodwa futhi nokuvumelana ngencazelo yawo. Paronomasia ezisetshenziswa njengeziwusizo sematheni ukuheha ukunaka abafundi ', isibonelo: ". Self-Ukuphathwa noma ukuzilimaza intando"
Gwema iphutha ecasulayo kulenkhulumo, ungasebenzisa lezi zincwadi. Ngakho, ukufunda ladidako ukubaluleka angasebenzisa izichazamazwi ezikhethekile. Basuke, ngokulandelana kwama-alfabhethi kunikezwa uhlu ngazimbili paronymic. Ngaphezu kwalokho, igama ngalinye ku pair linencazelo lucebe, kanye izibonelo ukusetshenziswa zokulawula in the inkulumo.
Namhlanje, ungasebenzisa isichazamazwi ezilandelayo:
1. "Dictionary of Russian ulimi ladidako" eyahlelwa NP Kolesnikov. It yanyatheliswa ngo-1971.
2. "ladidako Dictionary isiRashiya", eyahlelwa O. V Vishnyaka. Le ncwadi ishicilelwe ngonyaka ka-1984.
3. Ngo-1994, ngaphansi editorship ka Yu Belchikova MS Panyusheva ekhishwe omunye "ladidako Dictionary of the ulimi Russian." Kwakuthinta selikhishiwe ngo-2007.
Lezi zincwadi kuzokusiza bajwayelane imigqa paronimic eziyisisekelo, ukubaluleka amazwi abo ephambili.
Emagama - amagama ezifanayo umsindo kodwa anencazelo ezahlukene semantic. Kwezinye izimo, bangakwazi ukwenza into eyodwa. Ngamunye wethu njalo lisebenzisa inkulumo yakhe izwi-ladidako. Izibonelo ukusetshenziswa: kupenda kanye nesiginesha, bagqoke futhi ukugqoka.
Lapho sekuyisikhathi sokuba akhulume ukugwema ukusetshenziswa amazwi non-normative from ngazimbili paronymic. Kufanele ukhethe eyodwa evumelana isimo. Normative ukusetshenziswa ladidako - uphawu erudition namasiko okusezingeni eliphezulu yokukhuluma.
Umuthi 'Heparin-Akrigel ". incazelo